Sampana Maitso Tily - Tily eto Madagasikara
Ny Sampana Maitso Tily no anabeazana ireo zazalahy 12 ka hatramin’ny 16 taona. Ny fandaharana sy fihetsiketsehana rehetra atao dia tanterahina mba hahatonga ny Tily zazalahy ho olom-banona ilain’ny ankohonany, ny Fiangonany ary ny Fireneny tokoa. Mifanaraka amin’ny zava-kendren’ny Skotisma izany.
Fiainana mifototra amin’ny Lalàna sy Fanekena
Miankina amin’ny Lalàna sy Fanekena Tily avokoa ny zavatra atao rehetra.
Ny fanaovana Fanekena Tily no porofo fa Tily tokoa izy. Eo no anekeny fa hiezaka araka izay azo atao hanana fiainana mendrika ny maha-skoto azy dia ny :
hiasa ho an’ny Tanindrazana sy ny namana,
ary hanoa ny Lalàna Tily.
Asa avy hatrany eo anivon’ny tontolo iainana
Tanterahina amin’ny alalan’ny asa avy hatrany ny fanabeazana atao ao amin’ny skotisma, indrindra fa ny Sampana Maitso Tily. Ny fahazotoana mandray anjara amin’ny hetsika rehetra no hahatonga ny Tily ho vonona hatrany sy hanana anjara amin’ny fampandrosoana ny tenany sy ny manodidina azy.
Ny Fihetsiketsehana atao rehetra dia tanterahina eny anivon’ny zavaboahary.
Omena sehatra kely hahafahany mandray anjara sy mampiseho ny maha-izy azy ny Tily Sampana Maitso. Ny “Sokajy” no iantsoana izany, izay ivondronan’ny Tily 4 ka hatramin’ny 8 ary tarihin’ny iray amin’izy ireo ihany, antsoina hoe Lohan-tsokajy (LS). Sokajy 2 hatramin’ny 4 no lasa Antoko, tarihin’ny Mpiandraikitra.